Zinedine Zidane oo fariin dadban u diray labo ka mid ah xiddigihiisa kooxda Real Madrid – Gool FM
Zinedine Zidane oo fariin dadban u diray labo ka mid ah xiddigihiisa kooxda Real Madrid
(Madrid) 09 Jan 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa lagu soo waramayaa inuu fariin muhiim ah ee dadban u diray laba ka mid ah xiddigihiisa Los Blancos.
Zinedine Zidane ayaa fariin muhiim ah u diray labadiisa ciyaaryahan ee reer Brazil Vinicius Jr iyo Rodrygo kaddib kulankii xalay ee Spanish Super Cup.
Zidane iyo wiilashiisa Real Madrid ayaa waxay xalay guul muhiim ah kaga gaareen kooxda Valencia 1-3, waxayna iska xaadiriyeen finalka koobka Spanish Super Cup.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday maanta oo khamiis ah in Zinedine Zidane uu fariin muhiim ah u diray xiddigaha Vinicius Jr iyo Rodrygo, isaga oo ku qasbay inay kursiga keydka fadhiyaan inta lagu gudi jiray kulankii Valencia.
Sida laga soo xigtay Wargeyska “Sport” Zidane ayaa wuxuu u sheegay labada xiddig ee reer Brazil inuusan wali ka helin kalsooni buuxda, si uu midkoodna ugu tiirsanaado waqtiyada adag ee kooxda, gaar ahaan marka ay jiraan dhibaato dhanka dhaawacyada ah.
Inkasta oo ay ka maqnaayeen kooxda saddexda xiddig ee Karim Benzema, Gareth Bale iyo Eden Hazard, haddana Zinedine Zidane ma uusan isticmaalin xiddigaha Vinicius Jr iyo Rodrygo kulankii Valencia, sababtoo ah si buuxda uma aaminsana.
Arrintan ayaa waxay imaaneysaa inkastoo uu Zidane u adeegsado labadan xiddig kor ku xusan kulamada qaar, waxayna soo bandhigeen qaab ciyaareed fiican gaar ahaan Rodrygo, laakiin cid kasta ayaa fileysay in labadan xiddig ay ciyaari doonaan kulankii xalay ee Valencia, balse ma dhicin.
Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta bilaha ah ee kooxda Liverpool oo lagu dhawaaqay